Mazuva ese Chemical Chemical Raw Fekitori | China Mazuva ese Makemikari Raw Zvigadzirwa Vagadziri, Vatengesi
Zvizorwa peptide Nicotinoyl Tripeptide-1 Nicotinoyl-GHK upfu
Nicotinoyl Tripeptide-1 inoumbwa nema peptides eamino acid akateedzana, kuchenesa, uye kusanganiswa kweNiacin ine yakanakisa collagen kukura kugona Vitamin peptides iyo inogona kutarisirwa kuvandudza kuchena uye mitsara yakanaka.
Bata: Erica Zheng
Runhare: +86 21 2097 0332
Mhomho: +86 177 1767 9251
WhatsApp: +86 186 2503 6043 (WeChat & Teregiramu & Line)
Decapeptide-12 anti-pigmentation uye ganda rinojekesa CAS 137665-91-9
Decapeptide-12 ndeye oligopeptide iyo inoumbwa chete gumi amino acids. Iyi oligopeptide inozivikanwa neayo anti-tyrosinase chiitiko.
Cosmetic peptide Nonapeptide-1 powder anti-pigmentation uye ganda kujekesaCAS 158563-45-2
Nonapeptide-1 igirazi rinojekesa peptide, yakatorwa kubva kune melanocyte inosimudzira mahormone (MSH). Iyo inodzivirira chiitiko che tyrosine mune iyo melanocyte, melanin synthesis inhibition uye inobatsira kunyange kuburitsa ganda rako toni nekudzora hyper-pigmentation.
Cosmetic peptide Hexapeptide-10 anti-kukwegura uye Firming CAS 146439-94-3
Hexapeptide-10 inogadzirwa peptide ine Alanine, Isoleucine, Lysine, Serine uye Valine masara. Iyo inowedzera iko kwekutanga kwe laminin V uye α6-inosanganisa kusimudzira maseru anosunga, ine inoshamisa inooneka kugadzirisa ganda uye kusimbisa kugona. Hexapeptide-10 inosimudzira kuvakwazve kwema collagen uye inobatsira kudzikisa mitsara yakanaka uye saizi yepore.
Cosmetic peptide Hexapeptide-9 powder anti-kuunyana anti-kuchembera CAS 1228371-11-6
Hexapeptide-9, Collagen peptide, inobatsira kusimbisa masisitimu echimiro nekudyidzana maseru eganda nokudaro ichisimudzira maitiro ekuvandudza.
Zvizorwa peptidi Pentapeptide-18 Anti-kuchembera Anti-kuunyana CAS 64963-01-5
Pentapeptide-18 inoderedza kudzika kwemakaunyana pachiso kunokonzerwa nekudzvinyirira kwemhasuru dzekuratidzira kumeso, kunyanya pahuma uye nekukomberedza maziso.
Zvizorwa epepididi Pentapeptide-3 upfu Anti-kuunyana CAS 135679-88-8
Pentapeptide-3 chinhu chinopesana nemakwenzi chinhu chakasimba kwazvo.
Zvizorwa epeptide Tetrapeptide-30 yekupenya kweganda uye kujekesa
Tetrapeptide-30 ipeptidi nyowani yakagadzirirwa kuyera ganda ganda.
Zvizorwa mafuta peptide Tetrapeptide-4 anti-kuchembera uye anti-kuunyana
Tetrapeptide-4 iyo nyowani biomimetic tetrapeptide iyo inopa yakawedzera ganda kuwanda uye inopokana mhedzisiro yegiravhiti kuburikidza nekuzvikurudzira kugadzirwa kwezvinhu zvinobatana zvinyama zvikamu kuchengetedza hujaya chitarisiko uye kushora giravhiti.
Cosmetic peptide Tripeptide-29 inowedzera collagen uye Kugadzirisa ganda CAS 2239-67-0
Tripeptide-29 inogona kuwedzera collagen synthesis uye kugadzirisa ganda. Kushatiswa kwe collagen ndechimwe chezvikonzero zvinokonzera kuunyana kuumbika.
Zvizorwa peputayidi Tripeptide-1 GHK CAS 72957-37-0
Tripeptide-1 inokwanisa kukurudzira kugadzirwa kwe collagen muganda, uye yakawanda collagen inoreva mashoma makwinya uye ganda rinotaridzika.
Zvizorwa peptide Mhangura Tripeptide-1 Ghk-Cu poda inopesana nekukwegura CAS 89030-95-5
Mhangura tripeptide-1 ndeyemhangura yakaoma ye tripeptide-1, dzimwe nguva inopfupikiswa GHK-Cu. Mhangura Tripeptide-1 inogona kuvandudza kuganda kweganda, kujekesa, kusimba uye kudzikisa mitsara uye kuunyana. kugadzirisa bvudzi kukura nekuwedzera bvudzi follicles.